box02blog: going to cinema for G-FORCE 3D movie
ကျနော် မနေ့က အလုပ်ဆင်းတော့ ကြည့်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတဲ့ G-FORCE 3D movie ကိုရုပ်ရှင်ရုံမှာ သွားကြည့်တယ်လေ။ 3D movie ကို ဒါ ပထမဆုံးသွားကြည့်တာပဲ။ Hall ထဲဝင်တော့ မျက်မှန်ပေးတယ်။ 3D movie ကို အဲဒီမျက်မှန်မပါပဲကြည့်ရင် ဘာမှ focus မပျက်သလို ကြည့်လို့ မကောင်းဘူူး၊ ဝါးနေတယ်။ အဲဒီမျက်မှန်တပ်လိုက်မှ တကယ့် 3D ကိုမြင်ရတယ်။ အရမ်းမိုက်တယ်ဗျား.. ကိုယ့်အရှေ့မှာ တကယ်ဖြစ်နေသလို၊ ကိုယ့်ဘက်လှိမ့်ထွက်လာတဲ့ အရာဝတဿထု objects တွေက ကိုယ့်မျက်နှာတည့်တည့် လာရိုက်သလိုနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ အရမ်းကောင်းတယ်၊ Audio system ကလဲ 3D ထင်ပါတယ်၊ objects နဲ့အတူ sounds တွေကလဲ တကယ့် real အတိုင်းပဲ။ :Dကြိုက်တယ်ဗျား .. ရိုးရိုးထက် ဈေးကြီးပေမယ့်လဲ ကြည့်ရတန်တယ်လို့ ပြောရမယ် :Pခင်ဗျားတို့လဲ အရသာသိအောင် 3D movie ကောင်းကောင်းတစ်ကားလောက်သွားကြည့်လိုက်ပါအုံး ;DCheers!
Ko Ko Ye`December 11, 2009 at 9:30 PM:'( I like G-Force DVD9 is Good Want to See 3dReplyDeleteဘောက်တူးDecember 13, 2009 at 12:09 AMyeah bro. 3D is also very good, bro.ReplyDeleteAdd commentLoad more...